Kuhle Beaches European Ezitholakalayo ngu Izitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kuhle Beaches European Ezitholakalayo ngu Izitimela
ebhishi ngamaholidi abaningi baqala nge esicindezelayo izindiza, amabhasi, futhi izikebhe, kodwa kukhona indlela elula. Ukuhamba ngesitimela has eziningi kangaka izinzuzo, enishiyela uzizwa ekhululekile before you’ve even started your vacation. Noma ngabe ufuna ukudla okumnandi sinombono kolwandle noma iholide hlala nomndeni, there are plenty of beautiful European beaches accessible by trains.
E-ITALY: Bay of Silence, Sestri Levante
Abaseduze sesitimela: Sestri Levante Station, 1.1km, a 14 imiz uzihambele.
amabhishi efinyeleleka izitimela ulwandle kanye nemibala nice
I ebukekayo Italian coastal town of Sestri Levante is one of the beaches accessible by trains and has long been celebrated for its namathafa obumangalisayo futhi ezimibalabala ngasolwandle izindlu zokungcebeleka, bonke ocebile emlandweni namasiko. futhi beachgoers – uku inhlanhla. Beach encane okuthiwa Baia del Silenzio, noma 'Bay of Silence' uthola moniker yayo kusukela ezolile, crystal nasemanzini aluhlaza bay, kanye okwakheke rock zemvelo ukuthi ukuvikela ebhishi umoya.
Ukuze agweme izixuku, singathanda isiphakamiso ukuvakashela le ekhoneni ipharadesi ngenyanga kaSeptemba noma Okthoba. Lokhu kungemuva kokuba July no-August iholide-Abenzi balibangisa ekhaya.
EMilan Sestri Levante Izitimela
La Spezia ukuze Sestri Levante Izitimela
Izitimela eGenoa Sestri Levante
Parma ukuze Sestri Levante Izitimela
Beaches ACCESSIBLE ngezitimela ESPAIN: Playa de la Llosa, Cambrils
Abaseduze sesitimela: Cambrils sesitimela, nje 1,2km noma 16 imiz ukuhamba kusukela esiteshini sesitimela.
3 abatshuzi olwandle
Ngokungafani emabhishi abadumile ngaphezulu waseSpain Ibiza futhi Majorca, Platja de la Llosa kuyinto lolwandle ethule ogwini lolwandle edolobheni elincane Cambrils. Ilungele imindeni noma imibhangqwana efuna isikhathi sokuphumula. Playa de la Llosa unemisebenzi zokudlela kanye amathilomu eseduze, kanye izambulela futhi loungers ngomvuzo, zangasese zomphakathi, futhi ukufinyelela sabakhubazekile.
Beach ngokwayo coves elincane elenziwe ngumuntu nomkhawulo amagagasi nasemagagasini. Kuhlanganiswe ne amanzi ecacile blue efudumele, lokhu kwenza ukubhukuda futhi snorkeling okuphumuzayo kakhulu.
Abaseduze sesitimela: Meia Praia sesitimela, a 6 iminithi, 500m uhambo.
sasehlobo nabantu ogwini, a beach efinyeleleka izitimela
Kutholwe phezu edumile Algarve coast, the Meia Praia iyona enkulu kunazo zonke e-Lagos esifundeni futhi amabhishi ethu ngobukhulu efinyeleleka izitimela. Uma uqhathaniswa nezinye, izingxenye eziningi ezigcwele izivakashi ze-Algarve, Meia Praia kuyinto oasis ezine-ikhilomitha-eside langa isihlabathi segolide nokuzola. Kukhona futhi amathilomu Amabha dotted along the coastline. Unqenqema Sasentshonalanga ebhishi kancane matasa nakakhulu ngenxa isondele Lagos.
Meia Praia kuyinto Futhi a isikhungo idume ngokudla amanzi ezemidlalo kuhlanganise windsurfing, surfing kite, futhi jet skiing. Izivakashi ongakhokhela izifundo futhi ukuqasha imishini. Ukuze entsha ngaphansi, cwilisa emanzini abandayo eqabulayo futhi amanga-phansi lounger ngaphansi isambulela, futhi iyatholakala ukuze iqashwe.
Pick lethu lokugcina ngoba amabhishi efinyeleleka izitimela, EFRANCE: Ibhishi Senix, Guethary
Abaseduze sesitimela: Gare de Guethary 2.1km kude nje, kalula walkable kodwa ungase uthathe okusheshayo itekisi oluya kolwandle.
abenza ubuka kolwandle
Base benomsebenzi, esekusithekeni ogwini zasendle, engonakalisiwe eNingizimu-Western ugu waseFrance, Ibhishi Senix (futhi ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi Cenitz) iyona uya khona ephelele lomqali Surfers, imindeni, noma abahambi solo. Enhliziyweni Ezweni French Basque, phakathi Biarritz futhi Saint-Jean-de-Luz, Guethary kuyinto endala ebukekayo komzana.
Sise eseningizimu ekupheleni Guethary yingakho iyingxenye amabhishi ethu efinyeleleka izitimela, namagagasi ngesikhathi Plage de Senix kancane ezincane kuno uzowathola thola kuze ngasogwini e Biarritz, okuyinto njengoba surfing dolobha Europe laziwe. Ubuhle bemvelo kanye Vibe ekhululekile uyenze indawo ephelele vakashela.
Amathikithi e-Lyon kuya eBiarritz
Ingabe ufuna yokuthenga amathikithi esitimela kohambo lwakho emabhishi efinyeleleka izitimela kungabikho Imali yokubhuka? Vakashela Saveatrain ukuze ukufinyelela amanani ezingabizi kakhulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-beaches-accessible-by-trains%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi travelfrance i-Travelportugal uhambo lokuhamba